अन्त मिल्दै कांग्रेसमा बल्झिंदै मन्त्री विवाद, के–के भयो बालुवाटारमा ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
अन्त मिल्दै कांग्रेसमा बल्झिंदै मन्त्री विवाद, के–के भयो बालुवाटारमा ?
माओवादी, नेकपा र एस र जसपामा मन्त्री चयनका विषयमा कुरा मिलिरहँदा सत्ताका नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसमा भने अझै मन्त्रीको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।
बिहीबार ढिलोमा शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी तयारी अघि बढे पनि कांग्रेसमा गुटगत भागबण्डा मिल्न नसकेको हो ।
यस अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नोतर्फका मात्रै चार मन्त्री बनाएका छन् । यस्तोमा पौडेल पक्षले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा आफूहरूले तीन जनासम्म मन्त्री पाउनुपर्ने शर्त राखेको हो । तर, प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्रीको लागि नाम दिन आग्रह गरेका हुन् ।
मन्त्री चयनको विषयमा छलफल गर्न नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच छलफल भए पनि संख्यामा कुरा नमिलेको हो ।
देउवा पौडेल पक्षलाई २ सिटौला पक्षलाई एक मन्त्रालय दिएर आफूसँग थप एक मन्त्रालय राख्ने तयारीमा छन् । तर पौडेल पक्षले आफूहरूले कम्तिमा तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेको हो ।
संख्यामा कुरा मिल्न नसकेपछि पौडेल पक्षका नेताहरू उठेर हिँडेको एक नेताले जानकारी दिए ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले टुंगिन बाँकी क्रियाशील सदस्यताको विषयमा लामो छलफल भएको जानकारी दिए । साथै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा प्रधानमन्त्री र नेता पौडेलबीच सामान्य कुराकानी भएको जानकारी उनले दिए ।
‘लामो समय क्रियाशील सदस्यताको विषय छिटो टुंग्याएर महाधिवेशनमा जानेबारे छलफल भयो’ सिटौलाले नेपालवाचसँग भने, ‘म हुन्जेल रामचन्द्रजीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुहुन्छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले अब टुंग्याउने भएपछि म नाम माग्छु भन्नुभयो ।’
अरु थप कुराकानी आफू बाहिरिएपछि भएको हुन सक्ने सिटौलाले जानकारी दिए ।
तर आफूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म मन्त्रीको नाम नमागेको जानकारी सिटौलाले दिए । ‘प्रेसतिर सिटौला पक्षले को नेतालाई मन्त्री पठाउँदैछ भनेर चर्चा हुन्छ’ सिटौलाले भने, ‘तर, देउवाजीले मसँगै अहिलेसम्म नाम माग्नुभएको छैन ।’
यस अघि पनि पौडेल पक्षले बैठक गरेर आफूहरूलाई सम्माजनक हैसियत नदिए सरकारमा नै सहभागी नहुने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । कांग्रेसले सरकारमा रक्षा, संचार, महिला, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थप लिंदैछ ।
बालुवाटारमा जानु अघि नेता रामचन्द पौडेलको घरमा यो पक्षको बैठक बसेको थियो । बैठकले सरकारमा आफ्नो पक्षले कम्तिमा सम्मानजनकरूपमा तीनवटा मन्त्रालय र प्रभावशाली मन्त्रालय पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारमा नेता पौडेलको तर्फबाट सुजाता कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, तेजुलाल चौधरी र राजन केसी मुख्य दाबेदार छन् । सिटौला पक्षबाट भीमसेनदास प्रधान वा उमाकान्त चौधरीमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी छ ।
माओवादीले बुधबार मात्रै सरकारमा सहभागी हुने चार जना मन्त्रीकाे नाम टुंगाे लगाएकाे छ । चारै जना नयाँ अनुहारका सांसद माओवादीबाट मन्त्री बन्न लागेका हुन् ।